Merry Noely 2018 sy taona vaovao 2019 sambatra ho namana rehetra
ny mpitantana ny 18-12-22
Merry Noely 2018 sy taona vaovao 2019 sambatra ho namana rehetra, antenaiko fa hankafy ny fialan-tsasatra tsara!
Ny fomba hanaovana mafana nohitsakitsahiko amin'ny tavoahangy fitaratra?
ny mpitantana ny 18-10-23
A280 tanteraka Automatic Chain-Type Screen fanaovana pirinty sy Hot nohitsakitsahiko Machine Fa Glass Ary Plastic zavatra. Talohan'ny mafana nohitsakitsahiko amin'ny tavoahangy fitaratra, dia tokony ho raisina amin'ny alalan'ny tarika lelafo sy ny fanontam-pirinty lamba varnish toy ny fototra sosona nohitsakitsahiko. Raha tsy misy izany sosona, tsy afaka manao mafana nohitsakitsahiko amin'ny fitaratra mivantana ....
Inona no atao hoe Screen Pirinty natao?
ny mpitantana ny 18-07-16
Inona no atao hoe Screen Pirinty natao? Screen pirinty dia lena dingana izay cylindrical fisaka na plastika, fitaratra, vy, na hazo faritra azo voaravaka. Images dia nafindra tao ny anjara mivantana amin'ny alalan'ny ranomainty maika aza ny sary "may" ho efijery. Ho an'ny fanontam-pirinty sy ny efijery fisaka cylindrical scre ...
Pirinty natao tamin'ny manomboka Screen
Ity lahatsoratra ity mampiditra ny velona mpitarika ny T-shirt efijery dingana fanontam-pirinty tamin'ny 7 dingana, varingarina manana lamba fanontam-pirinty io toro lalana, rehefa cylindrical substrate pirinty. Raha mila fanazavana fanampiny, dia afaka tsindrio ny rohy: https://wickedprintingstuff.wordpress.com/screenprinting/
ny mpitantana ny 18-05-27
Avy amin'i Wikipedia, raki-bolana malalaka tsy tokony hafangaro amin'ny pirinty lamba. Screen pirinty dia teknika fanaovana pirinty andraisana ny harato ampiasaina mba hamindra ny substrate ranomainty teo, afa-tsy ao amin'ny faritra natao ho an'ny ranomainty tsy len-drano amin'ny alalan'ny fanakatonana Stencil. Ny vary na squeegee dia nifindra manerana ny scre ...
New ofisialy vohikala amin'ny tsipika
Ry namako malala isany, ny tranonkala vaovao eo andalana izao, misaotra anao noho ny mandinika amin 'ny tranonkala. Raha misy zavatra tsy mety momba ny famolavolana ny tranonkala, ny soso-kevitra dia ho sarobidy tokoa ankasitrahana izahay, dia vaovao farany ASAP. Manokana isika ao amin'ny milina fanontam-pirinty sy ny lamba mafana nohitsakitsahiko mạch ...
Adiresy: Floor 1, Xilibao Building, Lianhua Road 130, Buji Town, Longgang District, Shenzhen City, Sina, 518112.